HTC U11 Life: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ ဈေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမှု | Androidsis
HTC U11 Life: အလွန်အစွမ်းထက်သောအလယ်အလတ်တန်းစား၏သတ်မှတ်ချက်များ
HTC သည်အလွန်ရိုးရှင်းသောနှစ်မရှိခဲ့ပါ။ ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုဌာနသည်မပြီးဆုံးသေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဖုန်းများကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးသော်လည်းရောင်းအားသည်မရောင်းတော့ပါ။ ဖြစ်ပေါ်စေသောတစ်ခုခု သန်းကြွယ်သူဌေးရှုံး။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ပုံစံအသစ်များကိုဆက်လက်တင်ပြကြသည်။ ဒီလိုမျိုး HTC က U11 ဘဝ.
ဒါကဖြစ်ပါသည် ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်။ အသုံးပြုသူများကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်အလွန်နှစ်သက်ဖို့အားလုံးကိုပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရှိသောတစ် ဦး ကဖုန်း။ ထို့အပြင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Android ဖုန်းတစ်လုံးဆိုလိုသည်မှာစင်ကြယ်သော Android ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ဤ HTC U11 Life မှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာမျှော်လင့်နိုင်သနည်း။
အဲဒါသေချာတယ်လို့ပြောနိုင်တယ် off- လမ်းအလယ်အလတ်အကွာအဝေး။ ၎င်းသည်စျေးကွက်အတွင်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအားကောင်းသောဖုန်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအားကြီးသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆက်ကပ်ရန်လည်း။ ဒါ့အပြင် Android Oreo ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကြောင်းပိုမိုပြောပြပါ။
1 အသေးစိတ်အချက်အလက် HTC U11 Life
2 စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ပါ HTC U11 Life
အသေးစိတ်အချက်အလက် HTC U11 Life
ဖုန်းမှာ Full HD resolution ဖြင့် ၅.၂ လက်မ Super LCD မျက်နှာပြင် 1.920 x 1.080 pixels ။ အပြင်, သူ့ တစ်လက်မလျှင် pixel သိပ်သည်းဆ 423,64 ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာအတွက်မကောင်းတဲ့ပုံ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖုန်း၏မျက်နှာပြင်သည်သင့်အားကောင်းသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
အတွင်းပိုင်းကျွန်တော်တစ် ဦး ရှာပါ Snapdragon 630 ပရိုဆက်ဆာ။ ရှိပါလိမ့်မည် ရရှိနိုင်နှစ်ခုဗားရှင်း RAM နှင့်အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ကွာခြားမှုရှိသည့် HTC U11 Life ၏။ ဗားရှင်းများ၏ပထမ ဦး ဆုံးရှိပါတယ်3GB RAM နှင့် 32 GB Internal Memory ပါရှိသည်။ ဒုတိယရှိပါတယ်နေစဉ်4GB RAM နှင့် 64 GB Internal Memory ပါရှိသည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့နှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် internal memory သည် microSD ကဒ်ဖြင့်2TB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံကဏ္sectionတွင် HTC သည်စိတ်ပျက်စရာမလိုပေ။ နှစ် ဦး စလုံး ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာများသည် 16 megapixels ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နောက်ကင်မရာလုပ်နိုင်သည် ဗွီဒီယို 4K ကူးယူပါ အရည်အသွေးမြင့်အသံနှင့်အတူ။ ရှေ့ကင်မရာဖြင့်ဗီဒီယိုများကို FullHD တွင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
La ဒီ HTC U11 Life ၏ဘက်ထရီဖြစ်သည် လူများစွာကိုစိတ်ပျက်စေနိုင်သည်။ တစ်ခုရှိ 2.670 mAh ဘက်ထရီဤဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖုန်းများအတွက်အတန်ငယ်မလုံလောက်ပုံရသည်ပေမည်။ အခြားအပိုဆောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များအနေဖြင့်၊ ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကို IP67 အသိအမှတ်ပြုခြင်း.
စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ပါ HTC U11 Life
El ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ကာလကိုနိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ယူကေတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အခြားစျေးကွက်များသို့၎င်းရောက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်မပြုရသေးပါ။ စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည့်ရက်ကိုလည်းမသိပါ။ တကယ်တော့၎င်းကိုစတင်မည်လားမသိဘူး။ HTC မှအတည်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။
စျေးနှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်း, ဒီပြောင်းလဲမှုကစျေးနှုန်း ၃၆၉ ယူရိုပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းကိုဆန့်ကျင်စွာကစားနိုင်သည့်အရာ၊ အလယ်အလတ်ဖုန်း (အလွန်ကောင်းသော်လည်း) အတွက်ဖြစ်သည် စျေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ထွက်လှည့်. ဒီကိရိယာကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC U11 Life: အလွန်အစွမ်းထက်သောအလယ်အလတ်တန်းစား၏သတ်မှတ်ချက်များ
စမတ်ဖုန်းသည် Banggood တွင်မယုံနိုင်လောက်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချသည်